ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका बुवाले फ्रान्सको नागरिकता लिने ! « LiveMandu
ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका बुवाले फ्रान्सको नागरिकता लिने !
१८ पुष २०७७, शनिबार ११:१३
बिबिसी । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका बुवाले फ्रान्सको नागरिकता लिनका लागि आवेदन दिन लागेको बताएका छन् । ब्रिटेन युरोपेली सङ्घ इयूबाट औपचारिक रूपमै शुक्रवारदेखि अलग्गिएको छ । स्टेन्ली जोनसनले फ्रान्सको आरटीएल रेडियोसँग कुरा गर्दै आफ्नी आमा फ्रान्समा जन्मिएकाले आफू फ्रेन्चको रूपमा रहेको बताएका हुन् ।
असी वर्षीय उनी कन्जर्भेटिभ दलका तर्फबाट युरोपेली संसद्का पूर्वसदस्य हुन् । सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रहमा उनले इयूमै रहनका लागि मतदान गरेका थिए ।
उनका छोराले इयूबाट बाहिरिने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए र अन्ततः प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनैले इयूबाट ब्रिटेनलाई बाहिर निकाले । युरोपेली सङ्घसँग ४७ वर्षको सम्बन्धको विच्छेद पछि यूके ’नयाँ युगमा’
किन फ्रान्सको नागरिकता ?
स्टेन्ली जोनसनले बिहीवार इयूका व्यापार नियमबाट यूके अलग्गिनुभन्दा केही घण्टाअघि फ्रेन्च नागरिकता खोज्नुका आफ्ना कारण कारण खुलाएका थिए । “यो फ्रेन्च बन्ने कुरा होइन, “उनको भनाइ थियो । “मसँग जे पहिल्यै थियो यो त्यही पुनर्दाबी गर्ने कुरा हो ।”
उनले आफ्नी आमा फ्रेन्च आमाबाटै फ्रान्समा जन्मिएको बताउँदै थपेः “म सधैँ युरोपेली रहनेछु ।” उनले सन् १९७९ मा युरोपेली संसद्को सिट जितेका थिए। त्यति बेला उक्त संसद्को पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको थियो। जसकै कारण प्रधानमन्त्री जोनसनले आफ्नो बाल्यकालको एउटा समय ब्रसल्समा बिताएका थिए ।
ब्रेक्जिटको मुद्दाले जोनसन परिवारलाई विभाजित पारेको छ । पत्रकार रहेकी प्रधानमन्त्रीकी बहिनी रचेन जोनसनले सन् २०१७ को चुनावअघि कन्जर्भेटिभ पार्टी छाडेर ब्रेक्जिटविरुद्ध विरोधमा उत्रिएकी थिइन् ।
कन्जर्भेटिभ दलकै सांसद रहेका भाइ जो जोनसनले इयूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने विषयमा आफ्नो समर्थन दर्साउन सन् २०१८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएका थिए ।
बीबीसी । चिनियाँ उद्धार टोलीले जमिनमुनि सयौँ मिटर तलको सुरुङमा फसेका कामदारहरुलाई बाहिर निकाल्न अझै दुई हप्ता लाग्न सक्ने बताएको
नयाँ दिल्ली । चीनको माछामासु बजार रहेको बुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना प्रकोपले विश्‍वव्यापी महामारीको रुप लिएपछि यसको उत्पत्तिबारे अध्ययन